Seenaa WAGGAARII ALAMUU (1972-2018) – Oromedia
Home » Oduu » Seenaa WAGGAARII ALAMUU (1972-2018)
Jaal waggaarii Alamuu abbaasaa obbo Alamuu Kasasaafi haadhasaa aadde Gammadee Ayyaanaa irra bara 1972 godina wallagga bahaa koonyaa eebantuu bakka addaa Bakkanniisaa jedhamutti dhalate. Jaal waggaariin ijoolummaasaarraa kaasee maatii qotee bulaa irraa waan dhalateef maatiisaa akkuma ilma oromoo tokkootti gargaaraa nama guddatedha. Jaal waggaariin ilma amala qabeessa maatiisaaf abboomamuufi dargaggoota qe’ee dhalootasaaf fakkeenya ture. Yeroo ijoollummaasaa amma umuriinsaa barnootaaf qaqqabutti maatiisaaf ergamaa naamuusaan nama guddatedha.
Waaggaarii Amanuu (1972-2018)
Jaal waggaariin umuriinsaa akka barnootaaf qaqqabetti mana barumsaa Birbirsa waajjaa sadarkaa 1ffaa eegale. Mana barumsaa isaattis amala qabeessa fakkeenya barattootaa akka ture barsiisonnisaa imimmaan cobsaa dubbatu. Ijoollee hiriyyootasaa waliinis nama waliigaluufi amala qabeessa waan ta’eef mana barumsaa turetti fakkeenyummaan maqaansaa waamama ture. Jaal waggaariin barnootasaa sadarkaa 1ffaa xumuree qabxii bareedaa galmeessuun gara mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Biiftuu Naqamtee seene.Yommuu kana haatisaa aadde gammadeen ilmakoo karaan dudda handaaqqoo siif haa tahu addaaf addunyaa qabaadhu jedhanii galaasaa galeessaniifi eebbaan geggeessan. Qormaata biyyoolessaa kutaa 10ffaa darbuun bara 1992 hanga 1993tti mana barumsaa qophaa’inaa Naqamteetti kutaa11ffaafi 12ffaa xumure.
Akkuma barnoota sadarkaa qophaa’inaa xumureen gara koolleejjii New Genereeshinii seenee Information tekinooloogii barachuun dipiloomaa isaa eebbifame.Bara 2004ttis koolleejjii New Genereeshiniitii barnootasaa muummee management and information system’n digirii jalqabaa eebbifameera. Yeroo ammaattis yuunversiitii wallaggaa irraa siivil injiineeriingii waggaa sadeffaa barachaa ture. Jaal waggaariin mana barumsaa baratutti adda duree tahuun waa’ee rakkoo saba oromoorra mootummaa gita bittuun raawwatu mormuu eegale. Hiriyyootasaa waliin cunqursaa jaarraa lakkoofsise tole jedhee fudhachuu waan mufateef sochii barattoota oromoo warraaqsuu eegale. Warraaqsa yeroo addaa addaatti sochii mana barumsaa godinichaa keessatti adeemsifamaa ture adda durummaan hoogganeera. Sochii barattootaa kanarrattis injifannoolee gurguddoo lafa kaa’ee darbeera. Yommuu kana jaal waggaariin barattootaafi barsiisota isaa biratti kabajaafi jaalala guddaa gonfachuus danda’eera.
Jaal waggaariin sochii barattoota oromoo oromiyaa guutuutti adeemsifamaa ture suuta suuta hiddasaa diriirsuun guutuu oromiyaa waliin gahe keessattis milkaa’inaafi injifannoolee yoomiyyu hindagatamiin kaa’uu danda’eera. keessumaa sochii lixa oromiyaa magaalota akka Shaamboo, Naqamtee, Gimbii, Amboofi Dambi Doollootti geggeeffame keessatti harka lafa jalaan hiriyyootasaa waliin hirmaatee hirmaachisaa nama turedha.
Jaal Waaggaariin umurii dargaggummaa isaa hundumaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti dabarse. Wayita barnoota sadarkaa 2ffaa Naqamteetti barachaa tureerraa kaasee Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti Fincila Diddaa Garbummaa qindeessuu fi hoogganuu keessatti hirmaachaa ture. Barnoota sadarkaa olaanaa yeroo barachaa turettis hojii qabsoo irratti hirmaachaa ture. Hordoffii fi hidhaan diinaan yeroo hedduu hidhamee reebamaa ture. Bara 2006 dirree Qabsoo Bilisummaa Oromoo /QBO/ dame kibbaa deemee leenjii waraanaa fi siyaasaa fudhatee dirqama biyyaa keessatti bobba’ee osoo hojjetuu waxabajji bara 2007 humnoota tika wayyaaneen qabamee ma’iikelaawwiitti hiraara guddaatu irra ga’e.Mana hidhaa kana keessattis hiriyyootasaa akka Kumarraa Dhinsaa,akkasumas kan yeroo sana waliin ma’iikelaawwii jiru jaal Niimoonaa Xilahuunfaa waliin akka malee reebamaa aarsaa guddaa kanfalaa turan. Manni hiraarsaa kunis baatii ja’aa booda erga dararee booda himata itti baneera. Sana booda gara mana hidhaa Qaallittiitti fudhatame. Mana hidhaa Qaallittittis gidiraa hedduu keessa darbee wayita inni hidhaa waggaa lamaa fi baatii ja’a xumuretti manni murtii Federaaraa olaanaan waggaa 3 itti murteesse hidhaasa xumuree ba’e.
Waaggariin hanga Guyyaa kaleessaa /02/04/2018/ lubbuun isaa addunyaa kanarraa boqotuutti qabsoo ummata Oromoorraatti hirmaachaa ture.Jaal waggaariin qabsoo uummata oromoo cinaatti jireenyasaa geggeessuuf gufuulee hedduu keessa nama darbedha. Haa ta’u malee Jaal Waggaariin gufuulee kanaaf osoo hin jilbeenfatiin hojii dhuunfaasaa uummatee maatisaa geggeessaa nama turedha. Jaal waggaariin yeroo lubbuunsaa baatu kanatti abbaa daa’ima lamaa ture. Mucaa ilmaa Latii Waggaariifi Shamara tokko Simboo waggaarrii jedhaman nama horatedha.Jaal Waggaariin umuriisaa guutuu saba kanaaf waan jiraatee darbeef ilmoonsaa har’a gaaddisa abbaasaanii dhaban gargaarsa lammiisaanii akka barbaadan tahuunis beekamaadha.kanaafuu lammiin Oromoo hundi daa’imman jaal Waggaarii cinaa dhaabbachuun dirqama lammummaa akka baatan gamanumaan isiniif dhaamna.
Jaal Waaggarii Alamuu Kasaasa Guyyaa kaleessaa Bitootessa 02/2018 reebichaa fi hidhaa Wayyaneen yeroo dheeraaf mana hidhaatti irratti gochaa turteen lubbuun isaa aarsaa taateetti.Sirni geggeessaa isaas eebila 02/04/2018 Magaalaa Naqamteetti raawwateera.
Haati manaa waggaarii Lalisee Abarraa yeroo ammaa kana abbaa manaashee akkasumas jaalashee of biraa dhabdee gadda cimaa keessa jirti.Laliseen ijoollee guddisuu cinaatti barnoota kan barattu ta’uunis beekameera.Kanarraa ka’uun jireenyi maatii Jaal Waggaarii gaaffii jala seenee jira.Ilmaan qabsaa’aa kanaa akka boquu buusanii hin guddanneef book’n maqaa mucaasaa Simboo Waggaariifi Lalisee Abarraatiin banamee jira.Lakk. book Oromiyaa internaashinaal Bank 838491 isin beeksisna.Namni maatii waggaarii cinaa dhaabachuu barbaadus karaa lakk. Book armaan oliin deeggaruu danda’a.suuraan armaan gadii daa’imman Waaggaarii Simboofi Latiidha.
Maatii isa, firoottaanifi uummata oromoo maraaf jajjabina hawwina. Boollaa isaa Daadhiin haa guutu.
Qabsa’aan ni kufa qabsoon itti fufaa!
Previous: “Fincilli Xumura Gabrummaa ABO-Qeerroo Bilisummaa Oromootiin geggeeffamaa jira,” ABO
Next: Hariiroon Xoophiyaa fi Eertiraa Oromoof Maali?